नयाँ अध्ययनः ‘मिनिरल’ वाटर पिउँदा क्यान्सरको खतरा ! – mero sathi tv
On ४ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:३०
शरीरलाई पानी नभई हुन्न । शरीरका लागि स्वच्छ पानी आवश्यक छ । तर, अहिले हामीले पिउने पानी दूषित छ । हानिकारक छ । विषाक्ता छ । त्यही कारण फिल्टर गरेर, उमालेर वा विभिन्न विधिबाट शुद्धिकरण गरेर पानी पिउने गरिन्छ ।
काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रको हकमा त रोगको स्रोत नै भएको छ, पानी । पानीको माध्यामबाट विभिन्न महामारी फैलने गरेको छ । ट्यांकीमा जम्मा गरेर घर-घरको धारामा आउने पानी होस् वा ट्यांकरले आपूर्ति गर्ने पानी नै, स्वच्छ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यस्तो पानीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई नाजुक बनाउँदैछ ।
तर, खतरनाक बोत्तलको पानी !
हामीले बजारमा ‘मिनिरल वाटर’ भनेर पिउने वोत्तल बन्द पानी हानिकारक भएको हालैको एक शोधले खुलासा गरेको छ ।
एक त त्यसरी शुद्धिकरण गरिएको पानीमा ‘मिनिरल’को मात्रा कति हुन्छ भनेर खुलाइएको हुँदैन । त्यो पानी कति पिउन योग्य हो भनेर त्यसको गुणस्तर मापन गरिएको भएपनि त्यस्ता पानीको गुणस्तरप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पानीमा ९३ प्रतिशतसम्म प्लाष्टिकको स-सानो टुक्रा
बोत्तलमा भरिएको पानी मिनरलयुक्त वा शुद्ध छ भनेर सोच्नु नै भ्रमपूर्ण रहेको अध्ययनले बताएको छ । स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्यूर्योकका वैज्ञानिकहरुले विश्वभरको बोत्तलबन्द पानीमा गरेको अध्ययनले निरासलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
शोधकर्ताले चीन, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायत ९ देशमा बिक्री गरिने ११ अलग-अलग ब्रान्डको करिब २ सय ५९ प्याकेट बोत्तल जाँच गरेको थियो । उक्त जाँचमा के पाइयो भने, विश्वभर बिक्री हुने यस्ता प्याकेज्ड मिनिरल वाटरमा ९३ प्रतिशतसम्म प्लाष्टिकको स-सानो कण पाइयो । छिमेकी भारतमा समेत यस्तो पानी प्रशस्तै पाइएको छ । दिल्ली, चेन्नाई, मुम्बई लगायत १९ वटा स्थानको पानीको नामुनामा हानिकारक प्लाष्टिकको टुक्रा पाइयो ।
कुन कुन ब्रान्डको नमुना लिइयो ?
यसको टप ग्लोबल ब्रान्डमा एक्वाफिाना, ईवायिन -प|mान्सका चर्चित ब्रान्ड, जसको पानी भारतिय क्रिकेटर विराट कोहली पनि पिउँछन्), भारतयि ब्रान्ड बिसलेरी लगायत सामेल गरिएको छ । रिसर्च टिमका अनुसार चेन्नाईमा लिइएको बिसलेरी ब्रान्डको नमुनामा एक लिटर पानीमा ५ हजार माइक्रोप्लाष्टिक कण पाइएको थियो ।
४५ प्रतिशत पोलीप्रोपलीन
प्याकेज्ड पानीका कम्पनीले आफ्नो पानीको शुद्धता एवं गुणवत्तामा केही दावी गर्ने गरेका छन् । तर यस सोधको परिणाम आएपछि भने उनीहरुको गुणस्तरमाथि औंला उठाइएको हो ।
बोत्तलको बिर्को बनाउने कम्पनीले पोलिप्रोपलिनको उपयोग गर्छ । यो पदार्थ पानीमा ५४ प्रतिशतसम्म पाइन्छ । दोस्रो नम्बर हो, नाइलन जो १६ प्रतिशतसम्म पाइएको छ ।
बोत्तलबन्द पानी यति हानिकारक हुन्छ भन्ने तथ्यांक बाहिर आएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यस रिसर्चको समीक्षा गर्ने भएको छ ।
बोत्तलबन्द पानीले के हानी गर्न सक्छ त ?
मस्तिष्कलाई समेत असर
पानीमा घुलेको स-सना प्लाष्टिकको कणले महिलामा गर्भपतनको खतरा बढाउँछ । गर्भवती महिलालाई यसको निकै असर देखिएको छ ।
कार्यदलका संयोजकसहित अधिकांश मन्त्री भएपछि पार्टी एकताको काम प्रभावित